CEF (001) Uploaded by thangno at Your Listen
This music and or audio is not accessible due to copyright violations ."သူငယ်တို့ကို ခ ..." has been removed due toacopyright notification. Keep exploring! You can find more similar and music and audio here - CEF (001)
Tags: cefchurch school songsunday schoolsunday school songgospel songmyanmar gospel songmyanmarmyanmar songs
သူငယ်တို့ကို ခရစ်တော်ချစ်ပေ၏။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသည် ထိုသူတို့တွက်ပေတည်း။
သူငယ်တစ်ယောက်ကိုမျှ ပျက်စီးစေခြင်းအံ့ငှာ ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖ အလိုမရှိပေ။